DAAWO: Madaxda DF Soomaaliya ma isku aragti ayay ka ahaayeen Arrimaha Jubbaland?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in uu jiray ismaandhaaf siyaasadeed oo madaxda dawladda Soomaaliya ay isku aragti ka aheyn arrimaha doorashooyinka Jubbaland, gaar ahaana marka laga hadlayo sidda ay wax kusocdeen iyo kulamadii bishii March 2019, horey uga dhacay magaalada Muqdisho.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo uu wehliyo Kusimaha Taliyaha Nabadsugida iyo Sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa bilowgii sannadkan tagay Kismaayo, si ay wada xaajoodyo siyaasadeed ula yeeshaan Axmed Maxamed Islam oo ay kala hadlayeen sidii damacooda doorashada 2021-ka uu meelmar uga dhigi lahaa.
Wada hadalo labada dhinac ay yeesheen ayay isku afgarteen, balse si qorshahan looga dhigo mid sax ah Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sharuud uga dhigay in wada hadal gaar ah ay yeeshaan isaga iyo Madaxweynaha Soomaaliya.
Ka dib kulan la qorsheeyey oo ka dhici lahaa magaalada Muqdisho ayaa madaxweyne Farmaajo diiday saacadihii ugu dambeeyey, markii ay wafdigii Jubbaland soo gaareen caasumada, waxayna taasi ka dhigneyd arrin kale oo xasuus leh.
Xogta aan helnay waxay cadeynaysaa in ay Jubbaland arrimaheeda si rasmi ah uga go’neyn Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo doonaya in uu dhigto abaal siyaasadeed doorashada soo wajahan ee Soomaaliya, damaciisa si u gaarana faraha ka qaaday talaabooyin loo soo jeediyey.
Sidaas oo kale lacago la doonayey in lagu taageero siyaasiinta Isbedel-doonka ah ayaa la sheegay in uu diiday in laga bixiyo khasnada dawladda Faderaalka, ka dib markii sababo badan loo daliishaday, waxaana muuqata in gudaha dawladda laysku dhigay ciyaar adag oo siyaasadeed.